Io ivontoerana Convention io dia nahazo tombony
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Io ivontoerana Convention io dia nahazo tombony
generaltile manodidina ny 364x205 conv
International Convention Center Sydney (ICC Sydney) dia namoaka ny famerenany fanatanterahana isan-taona ny fisian'ireo solontena nanatrika hetsika tao amin'ilay toerana nahazoam-bola mitentina 510 tapitrisa dolara ho an'ny fandaniana mivantana ho an'ny New South Wales (NSW), na eo aza ny fatiantoka ara-toekarena avy amin'ny COVID-19 amin'ny volan'ny 2019/20 taona miasa.
Ny tatitra dia mampiseho herintaona amin'ny fizarana roa, miaraka amin'ny fivoriambe praiminisitra voalohany any Aostralia, toerana fampirantiana ary fialamboly am-boalohany ho an'ny taom-piasana matanjaka sy ara-toekarena iray hafa amin'ny 2019/20. Io dia tapaka noho ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19, niaraka tamin'ny famerana ny famoriam-bahoaka sy ny fivezivezena ary nanakatona ny hetsika mivantana nataon'ny olona tao amin'ilay toerana nanomboka ny tapaky ny volana martsa lasa teo.
Tao anatin'ny valo volana voalohany tamin'ny 2019/20, ICC Sydney dia nahazo 510 tapitrisa dolara ho an'ny fandaniam-bolam-panjakana ho an'ny Fanjakana ary namorona asa 2,806 eo an-toerana, mampiseho ny sandan'ny fampandrosoana 1.5 miliara dolara ho an'ny toekarena sy asa eo an-toerana. Na izany aza dia nilatsaka ny 386 tapitrisa $ avy amin'ny FY2018 / 19 noho ny efa-bolana niasa very. Tamin'ny taona 2018/19, hetsika 12 volana dia namorona $ 896 tapitrisa amin'ny fandaniana solontena sy asa 5,790 XNUMX¹.
Amin'ireo vola 510 tapitrisa dolara azo tamin'ny 2019/20, 73% ($ 375 tapitrisa) dia avy amin'ireo mpitsidika iraisam-pirenena 70,593, izay nandray anjara ihany koa tamin'ny fijanonan'ny alina 981,445 tao Sydney. Izany dia nanosika ny famatsiam-bola mitohy amin'ny fanavaozana ny trano fandraisam-bahiny eo an-toerana sy ny fampandrosoana, saingy nihena be tamin'ny fijanonana mandritra ny 1.77 tapitrisa alina tamin'ny taona lasa noho ny fanangonana sy famerana ny fivezivezena hisorohana ny hetsika hatramin'ny tapaky ny volana martsa.
Ny Hon. Rob Stokes, minisitry ny drafitra sy ny habaka ho an'ny daholobe, dia nilaza hoe: "Miaraka amin'ny fizahan-tany sy ny fizotran-tany misy antsika, ny fizahan-tany ary ny hetsika dia tratry ny areti-mifindra COVID-19, ny ICC Sydney dia nitondra anjara biriky lehibe tamin'ny toekarena NSW tamin'ny fanohizana namorona asa sy namerina ho an'ny fiarahamoninay. Ny lazany ho ivon-toerana voalohany tsy azo iadian-kevitra ao Aostralia ho an'ny kaonferansa, fialamboly ary fampirantiana dia mbola mitohy hatrany.
“Tamin'ny FY2019 / 20, ny hetsika ICC Sydney dia nitentina 510 tapitrisa dolara ho an'ny fandaniana mivantana tany NSW ary namorona asa eo an-toerana efa ho 3,000. Ny fisarihana ny famatsiam-bola sy ny fitazonana ny olona miasa no mpamily fanalahidin'ny fanarenana ara-toekarena antsika ary manao izany ny ICC Sydney. ”
ICC Sydney koa dia nanohy nanatanteraka ny adidiny ara-tsosialy, tontolo iainana ary toekarena ho an'ny fiarahamonina eo an-toerana amin'ny 2019/20. Ilay toerana nanolo-tena hividy divay NSW 100%, nanohana ireo mpamatsy isam-paritra 135 na NSW, dia nahazo ny loka fampirantiana manerantany ho an'ny fampiroboroboana loka ary nomena ny mpiara-miombon'antoka amin'ny taona KARI Foundation. Nanangana hetsika miaraka amin'ny mpanjifa koa izy amin'ny alàlan'ny programa Legacy sy CSR mitarika izao tontolo izao.
ICC Sydney dia iray amin'ireo ivon-toeran'ny fivoriambe voalohany nanerena haingana ny valanaretina COVID-19 tamin'ny alàlan'ny famolavolana indostrialy mitarika karazana protokol - ICC Sydney's EventSafe Operating Framework - hahafahana manome haingana ny fandidiana azo antoka sy ny fiverenan'ny hetsika.
Ho valin'ny COVID-19 sy ny fameperana vokatr'izany dia nanavao haingana ny ICC Sydney hanangana vahaolana hetsika virtoaly ho an'ny mpanjifa ary nampiasa ny toerana sy ny ekipa hanohanana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana mandritra ny areti-mandringana. Teo anelanelan'ny volana martsa sy 30 jona 2020, nanatontosa hetsika virtoaly 55 ny toerana, ao anatin'izany ny hetsika pro bono ho an'ny masoivohon'ny governemanta, fikambanan'ny indostria ary fikambanana mpanao asa soa. ICC Sydney koa dia nanolotra ny tranony ho an'ny serivisy vonjy maika NSW ho an'ny fijanonana ary ny miaramila dia nampiasa ny toerana malalaka ho an'ny fampiofanana.
Notohizan'ny minisitra Stokes: "Rehefa mijery ny fanarenana amin'ny taona mahakivy isika, matoky aho fa ny ICC Sydney dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny NSW sy ny fahombiazan'i Sydney ho toerana mandroso sy manankarena kolontsaina".
Mitondra fampifangaroana hetsika sy mpitsidika marobe any Sydney sy Aostralia, tamin'ny taona 2019/20 ICC Sydney dia nanolotra hetsika 487 fototra, anisany ny hetsika iraisam-pirenena 18 lehibe, fivoriambe nasionaly 96 ary hetsika fampirantiana 41, talohan'ny areti-mandringana. Tafiditra ao anatin'izany ireo mpitsidika iraisam-pirenena 70,593 sy 195,273 2019 nanatrika hetsika malaza eran'izao tontolo izao, toa ny Million Dollar Round Table Global Conference, PACIFIC 2019 Maritime International Exposition ary RobocupXNUMX, izay nametraka an'i Sydney teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Geoff Donaghy, tale jeneralin'ny ICC Sydney, dia nilaza hoe: "Tao anatin'ny telo taona niasana, ny ICC Sydney dia nahazoana vola mitentina $ 2 miliara dolara ho an'ny toekarem-panjakana. Nampiantrano mpitsidika manodidina ny 3.5 tapitrisa izahay, izay namorona fijanonana nandritra ny 4 tapitrisa alina tao Sydney. Nanohana mivantana ny tantsaha, mpamokatra divay ary mpamokatra ambaratonga 135 mahery isam-paritra na NSW izahay.
“Ambonin'izany, ny programa Legacy izay mitarika an'izao tontolo izao dia manome tombony lehibe sy fotoana lehibe ho an'ny indostrian'ny famoronana ao Sydney, ny orinasa First Nations, ary ny vondrom-piarahamonin'ny mpianatra. Manohy manangana ny lazan'i Sydney ihany koa izahay amin'ny maha-tanàna hendry sy an'izao tontolo izao an'izao tontolo izao.
“Na dia nisy fiatraikany ratsy teo amin'ny asa aman-draharaha sy ny vokatra aza ny areti-mandringana COVID-19, ny fampahatsiahivana isan-taona ny fampahatsiahivana dia fampahatsiahivana lehibe momba ny lanja lehibe eo amin'ny lafiny kolontsaina, sosialy ary toekarena ao amin'ny ICC Sydney. Matoky aho fa na ny ICC Sydney na ny orinasam-pandraharahana momba ny hetsika lehibe dia handray anjara toerana lehibe amin'ny fanarenana an'i Sydney sy Aostralia amin'ity krizy ity ”.
Misokatra ny ICC Sydney ary miteraka hetsika virtoaly sy hybrid amin'izao fotoana izao, ary koa hetsika maro isam-batan'olona ao amin'ilay toerana, mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ankehitriny.
Hijery ny Tatitra Fampisehoana isan-taona an'ny ICC Sydney 2019/20 visit here ary raha te hahalala bebe kokoa momba ny ICC Sydney, fitsidihana www.avalnine.com.
Ny traikefa nahatsiravina Qatar Airways dia nahitana fanadinana fivaviana tao amin'ny seranam-piaramanidina Doha
Ny Heroista fizahan-tany voalohany avy any Malezia dia ekena manana fifandraisana Alemanina